Excel သမားတစ်ယောက် မေးခိုင်းလို့ပါဗျာ — MYSTERY ZILLION
Excel သမားတစ်ယောက် မေးခိုင်းလို့ပါဗျာ
ဥပမာဗျာ ပစ္စည်း ၁၀ မျိုးရှိမယ် ၁ လစာ ကို ထုပ်ချင်ရင် မှတ်ထားမယ်ဗျာ အဲ့မှာတဲ့ သူက
sheet တစ်ခုထဲမှာဆိုရင် တစ်လ ကို ၃၀ ၃၁ ရက်ပေါ့ ဒါမယ့် အခါတစ်ထောင်ထုပ်လို့ အခါတစ်ထောင်ရိုက်ထည့်ချင်ထည့်ရမယ် ဒါမယ့် Sheet နောက်တစ်ခုမှာ အဲ့ပစ္စည်းတွေကို တစ်ခုချင်း တစ်ရက်ချင်း ပေါ်အောင်လင့်ခ် ချိတ်ထားချင်ပါတယ်တဲ့ တစ်ရက်နေ့မှာ ၁ ခုထပ်ပေမယ့် ၁၅ ရက်နေ့မှာ အခု ၅၀ ထုပ်ချင်ထုပ်မယ်တဲ့ အဲ့လာ နောက်Sheet မှာ
ကျွန်တော်လဲနားမလည်လို့ ဒီမှာပို့စ် တင်ပီးမေးလိုက်တာပါ သိတဲ့သူများ မစပါဦးဗျာ
MZ ၀ိုင်းတော်သားများ စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာကြပါစေ
အစ်ကိုမေးတာ ကျွန်တော်တော့သိပ်မရှင်းဘူးဗျာ။နမူနာဖိုင်လေးနဲ့ဆို ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။ ရှေ့က sheet ကဟာကို နောက် sheet မှာ link လုပ်ချင်ရင်တော့ ( ဥပမာ sheet1 ထဲက A2 ကို link လုပ်ချင်ရင် ) ကိုယ်ပေါ်ချင်တဲ့နေရာမှာ ဒီလို ရိုက်ပါ- sheet1!A2 ။ အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း ကတော့ ကိုယ်ပေါ်ချင်တဲ့ cell မှာ = အရင်ရိုက်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ကိုယ် link ချိတ်မယ့် cell ကို select ပေးပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
zaw min oo wrote: »
Yes. Please provide more information. One useful formula will be SUMIF Function.
Please see the attached file in which I made three sheets namely "Data Entry", "SumIf" and "Pivote". All you need to do is just fill the transition in "Data Entry" sheet. In "SumIf" sheet, you can find the total number of items out. In "Pivote" sheet, you can find the total number of items out by date. Hope it would be of solution for your friend's question.
Sheet 1 နဲ့ sheet2ကို link ချိတ်ချင်တယ်ဆိုပါဆို့
sheet2မှာ ကိုပေါ်စေချင်တဲ့ နေရာမှာ ( A2 မှာလား၊ B2 မှာလား) ညီမျှခြင်း = ကိုရိုက်ပြီး Sheet1 ကို ပြန်နှိပ်ပြီး ပေါ်စေချင်တဲ့ data အစမှ တစ်ချက်နှိပ်လိုက် (select လုပ်ခို်င်းတာ) ပြီးရင် ပုရွက်ဆိတ် လိုပြေးနေမယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ enter ခေါက်လိုက်ပါ။ သူ့ဟာသူ sheet2ကို ရောက်သွားမယ်။ ပြီးရင် series ဆွဲလိုက်ပါ။ ပြီးပါပြီ။ ပြင်စရာရှိရင် sheet 1 မှာ သွားပြင်ရမယ်။ sheet2မှာလဲ သူ့ဟာသူ ပြင်သွားမယ်။ မေးခွန်းက အဲဒါကို ဆိုလိုချင်တာ မဟုတ်လား။
ကျွန်တော်လဲ သိပ်နားမလည်ဖြစ်နေတယ်။ သေသေချာချာနားလည်အောင် ပုံလေးနဲ့ပြပေးပါလား။
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခုတော့ အဆင်ပြေသွားပီလို့ပြောပါတယ် (ကျွန်တော့ကိုမေးခိုင်းတဲ့ သူ) သူဘယ်လို လုပ်လိုက်လဲတော့မသိဘူး (တကယ်မသိတာ) ခုလို ၀ိုင်းဆွေးနွေးပေးတဲ့ သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်